Breaking News: Dagaalo culus oo dib uga qarxay magaalada Muqdisho – SBC
Breaking News: Dagaalo culus oo dib uga qarxay magaalada Muqdisho
Posted by editor on August 7, 2011 Comments
Dagaalo culus ayaa dib uga curtey magaalada Muqdisho maalin ka dib markii xoogaga Shabaabka ay shaaciyeen inay ka baxeen goobihii ay ka dagaalamayeen oo ka tirsan degmooyinka caasimada.
Dagaalka ayaa galinkii dambe ee maanta waqtiga Geeska Afrika wuxuu ka qarxay deegaano ku teedsan wadada Warshadaha gaar ahaan Isgoyska Towfiiq, agagaaraha warshada sigaarka & Taraqa & xeradii hore ee EFECO, waxaana dagaalku uu yimid ka dib markii maleeshiyaad ka tirsan Shabaabku ay weeraro gaadmo ah ku qaadeen fariisimo ay ka sameysteen goobahaasi ciidamada dawlada KMG & kuwa AMISOM.
Sidoo kale kooxaha Shabaabku waxay weeraro la eegteen ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka soo baxay xaruntii hore ee wasaarada Gaashaandhiga kuwaasi oo u soo ruqaansadey xeradii Guulwadayaasha & kuwa kale oo adeegsanayey wadada warshadaha.
Dirritan ayaa si weyn la isugu adeegsadey noocyada kala duwan eeaar ahaan hubka, gaar ahaan dabaabaadka dagaalka iyadoo dayaanka madaafiicda si weyn loooga maqlayey magaalada Muqdisho.
Kooxaha Shabaabka ayaa la aaminsan yahay inay la soo baxeen khidado cusub oo dhanka dagaalka ah iyagoo doonaya inay qaadaan dagaalo dhuumaaleysi ah ama ku dhufoo ka dhaqaaq, maadama ay u muuqato in looga itaal roonaadey dagaaladii fool ka fool ahaa isla markaana ay ka baxeen furimaha dagaalka.